फिल्मको खडेरी - मनोरञ्जन - नेपाल
स्वरबाट एकैसाथ अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए, केकी अधिकारी र रिमा विश्वकर्माले । यो आठ वर्षको बीचमा केकी सफलताको शिखरमा पुगिन् । एक दर्जन अवार्ड हात पारिसकिन् । तर, रिमा हिरोइनका रुपमा अझ ‘मार्क’ हुन सकेकी छैनन् । कारण, न उनलाई मुख्य भूमिकामा पत्याइयो, न सहायक भूमिकामा देखिएका इस्केप, भिसा गर्ल, भाले फाइट, ऋतु, बाटोमुनिको फूल २ लगायतका फिल्मले मुनाफा कमाउन सके । बरु, फिल्मबाट भन्दा रियालिटी सो नेपाल आइडलको होस्ट भएपछि बढी प्रसिद्धि कमाइन् । दुर्भाग्य ! सो सकियो तर रिमालाई कुनै गिनेचुनेका ब्यानरले पत्याएका छैनन् । कतै यो उनी फिल्मवृत्तबाट ओझेलमा पर्ने संकेत त होइन ? नयाँ हिरोइनहरुको बोलवाला जो छ ।
खालि हँसाउने ध्याउन्न [फिल्म समीक्षा : चंगा चेट]
निर्देशक उही नायक नयाँ